गण्डकी प्रदेशको बजेटः स्वास्थ्यमा प्राथमिकता spacekhabar
गण्डकी प्रदेशको बजेटः स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि रु. ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
मंगलबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त कृष्णचन्द्र नेपालीले आब २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोमा भन्दा रु. ४ अर्बले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष रु. ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको बजेट ल्याइएको थियो। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेटको आकार पनि खुम्चिएको हो।
चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ५५.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनमा ०.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु. १ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानमा स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब १० करोड, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीका लागि प्रत्येक पालिकालाई रु. १ करोड प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए।
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर आएको गण्डकी प्रदेशको बजेटले प्रदेशका जिल्ला अस्पतालमा आँखा, किड्नीका बिरामीलाई डायलाइसिस र ज्येष्ठ नागरिकका लागि वार्ड बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारले रु. ५० हजार राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोना भएर मृत्यु भएका परिवारका सन्तानलाई रु. ५ हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रदेशले घोषणा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १, २०७८, ०८:०६:००